ललिता जग्गा प्रकरणमा गच्छदार पक्राउ पर्न सक्ने ! - Nepal Samaj
ललिता जग्गा प्रकरणमा गच्छदार पक्राउ पर्न सक्ने !
२४ चैत, २०७७नेपाल समाजअपराध, राजनीति, समाज
गच्छदारलाई सुरुमा १५ दिनको म्याद राखेर अदालतमा उपस्थित हुन भन्दै सुनसरीमा म्याद टाँसेको थियो । अदालतले म्याद जारी गर्दा पनि उपस्थित नभएपछि दोस्रो पटक एक महिनाको समयसीमा राखेर म्याद जारी गरेको हो ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई मात्र थुनामा पठाउने आदेश विशेष अदालतले गरेको थियो । पौडेल भने सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट धरौटीमा रिहा भइसकेको खवर राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।